Android tablet အတွက် WhatsApp ကို Download လုပ်ပါ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ | Androidsis
သူတို့အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါလက်ကိုင်ဖုန်းကိုစွန့်ပြီးတက်ဘလက်သို့လှည့်လာကြသူအနည်းငယ်သာရှိသည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့သညျထိမိလဲစရာအကွောငျးရငျဆိုငျခွငျးခံရ တက်ဘလက်များအတွက် WhatsApp ကို ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးထားသည့်အတိုင်းရေပန်းစားသည်မဟုတ်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအခြားနည်းလမ်းများပေါ်ထွက်လာသော်လည်းသင် Android tablet အတွက် WhatsApp ရရှိရန်အနည်းဆုံးဗဟုသုတရှိရမည်။ လူကြိုက်အများဆုံးမှာကိုရီးယား Samsung ၏တက်ဘလက်များဖြစ်သည် WhatsApp ကို Samsung Tablet အတွက် download လုပ်ပါ သိပ်ပြီးမရှုပ်သင့်ဘူး၊ ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါတို့ပြချင်တယ်။
တက်ဘလက်များသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလူကြိုက်များလာသည်။ သူတို့ရောက်ရှိလာချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့ဖန်သားပြင်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပြောင်းလဲသွားသည် သို့သော်၎င်းတို့သည်နာရီအနည်းငယ်သာရှိသေးသည်။ စမတ်ဖုန်းဖန်သားပြင်များတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့လာခြင်းကြောင့်သုံးစွဲသူများစွာသည်တက်ဘလက်အတွက်အဓိပ္ပါယ်ပိုနည်းလာသည်။ သို့ရာတွင်၊ သုံးစွဲသူအချို့ကျန်ရှိနေသေးပြီး၎င်းကိုဖျော်ဖြေရေးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်နှင့်အိမ်၌ရှိသောအကြောင်းအရာများကိုဆက်လက်သုံးစွဲနေဆဲဖြစ်သောသုံးစွဲသူများ၏နယ်ပယ်သည်အတော်လေးကြီးမားသည်။ ထို့ကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်စမတ်ဖုန်းများကိုထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်၎င်း၏အဆင့်များ၌တက်ဘလက်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ မပါရှိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ WhatsApp ကို Android တက်ဘလက်တစ်ခုမှာဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲ.
1 WhatsApp ကို Tablet အတွက်အခမဲ့ရယူပါ
2 WhatsApp ကို Wifi တက်ဘလက်တွင် SIM မပါပဲထည့်သွင်းနည်း
3 WhatsApp ကိုသင်၏မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်တွင်တစ်ချိန်တည်းမည်သို့ထားရမည်နည်း
WhatsApp ကို Tablet အတွက်အခမဲ့ရယူပါ
WhatsApp သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် WhatsApp နှင့်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ Android အတွက်မူ၎င်း၏ open system သည်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိထားသဖြင့်လွယ်ကူသည် တရားဝင် WhatsApp website ကိုသွားပြီး .apk ကို download လုပ်ပါ WhatsApp ကိုငါတို့ tablet ပေါ်မှာ install လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေသောတက်ဘလက်၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်သော်လည်းအခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ တက်ဘလက်အများစုသည် WhatsApp အား Google Play စတိုးမှဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ခွင့်မပြုပါ။ ဤအချိန်တွင်အကောင်းဆုံး WhatsApp ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သေချာသည်။ တက်ဘလက်များအတွက် WhatsApp ကို Messenger ကို။
ထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့ Android မှာ WhatsApp ကို၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်အခြားမည်သည့်ကိရိယာ၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့်မတူဘဲ activation ကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အဆက်အသွယ်များနှင့်စတင်စကားပြောနိုင်သည်
ဘယ်အချိန်မှာ WhatsApp ကို update လုပ်ပါ တက်ဘလက်တွေအတွက်တော့လိုက်နာရမယ့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကတခြား application တွေလိုပဲအတူတူပဲ၊ သင့်ကိုငါတို့ကျန်နေစေတဲ့ link မှာနောက်ထပ်အချက်အလက်တွေရှိနေတယ်။
WhatsApp ကို Wifi တက်ဘလက်တွင် SIM မပါပဲထည့်သွင်းနည်း
ဒီမှာပြwhoနာကသုံးစွဲသူတွေပေါ်လာတယ် သူတို့တက်ဘလက်များတွင် SIM ကဒ်ကိုမသုံးပါဆိုလိုသည်မှာ WhatsApp အကောင့်ကိုဖွင့်ရန်အခြားကဒ်သို့မဟုတ်အခြားနံပါတ်မရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကြီးမားသောပြproblemနာရှိသည်။ ကောင်းပြီ၊ WhatsApp သည်ပလက်ဖောင်းပလီကေးရှင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်တော်တစ်ခုတည်းကိရိယာတစ်ခုတည်းမှာနံပါတ်တစ်ခုသာရနိုင်တယ်။ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကဝယ်ရန်ဖြစ်သည် တရုတ်တက်ဘလက် 4G ဖြင့်ထူးခြားသောနံပါတ်ကိုပေးပါ။
ပထမရွေးချယ်စရာမှာမည်သည့် application ကိုမဆို Google Play Store မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဖြစ်သည် WhatsApp ကို Web client ကို Clone, ပြီးတော့သူတို့ကငါတို့ဖုန်းကို၊ ဖုန်းနဲ့၊ အဆက်အသွယ်တွေအတူတူ၊ ဖုန်းနံပါတ်တူတူ WhatsApp ကိုငါတို့တက်ဘလက်မှာသုံးခွင့်ပြုလိမ့်မယ်။ ဒီရွေးချယ်စရာအတွက်ကောင်းတာကအမြန်ဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးပဲ။ ဒီ link ကနေ application ကို download လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းပေါ်ရှိ WhatsApp ဆက်တင်များအပိုင်းမှ Bidi ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်ရမယ်။ "WhatsApp Web" ကိုနှိပ်ပါ။ စကင်နာကိုစတင်ရန်စမတ်ဖုန်း။
အခြားနည်းလမ်း WhatsApp ဝက်ဘ်ကိုတိုက်ရိုက်သုံးပါwww.web.whatsapp.com ထဲသို့ ဝင်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန် Android browser ၏ desktop version ကို load လုပ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် Bidi ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီး၎င်းသည် PC ပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်သကဲ့သို့စတင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်အိမ်သို့ပြန်လာပြီးသင်၏ဖုန်းကိုလုံးဝမေ့သွားပြီးတက်ဘလက်ကိုလူမှုကွန်ယက်များ၊ အီးမေးလ်များကိုစစ်ဆေးရန်ရွေးချယ်ပြီး Netflix စီးရီးကိုခံစားပါလျှင် ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ WhatsApp ကိုလက်ခံရရှိလို့ပါဘယ်သူ့မှာရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့သင်ပြေးတက်စရာမလိုဘူး ရဲ အနားယူချိန်၌သင့်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါ။
WhatsApp မှ၎င်းတို့သည်စမတ်ဖုန်းကိုမဖွင့်ဘဲဘရောင်ဆာ (သို့) တက်ဘလက်မှ WhatsApp အကောင့်ကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည့် multi-device application ကိုဖွင့်ရန်ရှိ၊ မရှိဆက်လက်စဉ်းစားနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏တက်ဘလက်မှ WhatsApp ကိုစစ်ဆေးပါ ဒါကြောင့် browser ကိုမှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
WhatsApp သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp ကိုဘရောက်ဇာမှတဆင့်ကွန်ပြူတာမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည် သက်ဆိုင်တဲ့နံပါတ်ပါတဲ့စမတ်ဖုန်းကိုဖွင့်ထားတယ်၎င်းသည်မှန်များကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သောကြောင့်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ဖြေကြားခြင်းအားလုံးကို web ဗားရှင်းနှင့်အပြန်အလှန်ထင်ဟပ်သည်။
မသန်စွမ်း WhatsApp ကိုသင့်မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်တွင်ထားပါ အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည် -
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့၏တက်ဘလက်တွင်ပုံမှန်အသုံးပြုသောဘရောင်ဇာကိုဖွင့ ်၍ web.whatsapp.com ကိုဖွင့်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်ပတ်မှုပြproblemsနာများကိုမခံစားလိုပါက Firefox, Chrome သို့မဟုတ် Samsung Internet Browser ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပေးသည်။
အကယ်၍ QR ကုဒ်ပါသောဝဗ်ဗားရှင်းကိုမပြပါကကျွန်ုပ်တို့သည် browser ရွေးချယ်စရာများကိုရှာဖွေ။ ထို option ကိုရှာဖွေသည် Desktop site ကိုတောင်းဆိုပါ.
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းနှင့်လက်လှမ်းမီမှုကိုရယူသည် Menu> WhatsApp ကို Web နှင့်ကင်မရာ activated လိမ့်မည်။ QR ကုဒ်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည် default ဖြင့်မှတ်သားထားသော option ကိုရှာပါ။ ကျွန်ုပ်ကို Logged in လုပ်ပါ။ သင်တက်ဘလက်မှ WhatsApp ကိုဝင်ရောက်လိုသည့်အခါတိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမသွားလိုပါကအကွက်ကိုအမှတ်မပြုပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့ကတက်ဘလက်ဖန်သားပြင်မှာကင်မရာကိုညွှန်ပြရမယ် အဆိုပါ QR ကုဒ်အသိအမှတ်ပြုရန် chats များအားလုံးကို browser အတွက်ကွန်ပြူတာများအတွက် web version အလားပြသပြီးပြလိမ့်မည်။
တက်ဘလက်ပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းမှ WhatsApp စာများလက်ခံရရှိရန်အတွက် WhatsApp ကိုတက်ဘလက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ Desktop Shortcut တစ်ခုပြုလုပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ဘလက်၏, အမြဲတမ်းလက်မှာရှိသည်နှင့်ငါတို့ tablet ၏ desktop သို့မဟုတ်လျှောက်လွှာအံဆွဲမှတဆင့်ရှာဖွေစရာမလိုပါရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တက်ဘလက်မှ WhatsApp ကိုအသုံးပြုရန်အသုံးပြုသော ၀ က်ဘ်သို့ဖြတ်လမ်းတစ်ခုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် browser options menu ကို နှိပ်၍ ရွေးစရာကိုရှာရမည် စာမျက်နှာသို့ဖြတ်လမ်းထည့်ပါ။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တက်ဘလက်၏ desktop သို့တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်မှုကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် application ကိုကဲ့သို့ WhatsApp အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ရန် default browser ကိုဖွင့်ပေးလိမ့်မည်။
ဒီဖြစ်စဉ်ကို သငျသညျအခါတိုင်းလုပ်ဖို့မလိုပါ ငါတို့ WhatsApp ၏ version ကိုတက်ဘလက်ပေါ်ပထမဆုံးအကြိမ်သာရယူလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်တစ်ခုမှာ application settings မှတဆင့် WhatsApp ဝဘ်ဆိုက်များအားလုံးကိုပိတ်လိုက်ပါကဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ WhatsApp မှ၎င်းမှ browser သို့ပေးသောခွင့်ပြုချက်ကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။ စမတ်ဖုန်း မှလွဲ၍ အခြားကိရိယာမှ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရပါမည်။